Atụmatụ N'ihi ejegharị Europe Naanị Site Train | Save A Train
Home > Travel Europe > Atụmatụ N'ihi ejegharị Europe Naanị Site Train
(Emelitere ikpeazụ On: 06/10/2020)
Ejegharị Europe ụgbọ okporo ígwè bụ otu n'ime ndị kasị mara mma, scenic and cultural journeys in the world. Ma ị na-achọ kpọmkwem ụgbọ oloko n'agbata isi European obodo ndị dị ka ndị ọhụrụ London ka Amsterdam ọzụzụ ma ọ bụ ị na-achọ ihunanya ụgbọ okporo ígwè njem, European ụgbọ okporo ígwè eme njem nwere ya niile.
The ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ interrailing site Europe kwa afọ bụ 400,000 ndị mmadụ. Ị nwere ike ịga n'elu 30 countries using interrailing tickets. Ebe ọ bụ na interrailing malitere na 1972, ọtụtụ nde mmadụ gara site Europe na iji otu okporo ígwè tiketi.
Ejegharị ejegharị na Europe na a otu tiketi na-abịa na ya uru na ọghọm. E nwere ọtụtụ ihe na saịtị online raara nye Atụmatụ maka njem onye chọrọ ịhụ Europe ụgbọ okporo ígwè. Na saịtị ndị a na-agụnye ụzọ Nyewe apps na weebụsaịtị / blọọgụ na-enye gị Atụmatụ na otú mmefu ego.
Isiokwu a na-dere ịkụziri banyere Train Travel na e mere site Save A Train, Ndị dị ọnụ ala Train tiketi weebụsaịtị Na The World.
Ejegharị Europe naanị
Njem site Europe site onwe gị nwere a otutu uru. Mgbe ị na-site onwe gị, i nwere zuru ezu na-achịkwa gị njem.
Ịnọ nanị na-enye gị ohere ikpebi na gị onwe gị njegasi, eri ihe ọ bụla ị chọrọ na mgbe ịchọrọ ma zere iso ndị ọzọ nwee esemokwu maka njem gị,
Nnwere onwe dị otú nwere ike ime ka ihe onwe onye na-chọpụtara na ohere izute ọhụrụ ndị mmadụ na ndị ọzọ na-akwagharị akwagharị, ebe reinventing onwe gị. Nke a solo ahụmahụ nwere ike ime ka onwe-ibu.
Dortmund na Hanover Ụgbọ oloko
Essen na Hanover Ụgbọ oloko
Bonn na Hanover Ụgbọ oloko
Luxembourg na Hanover Ụgbọ oloko
enwe a enyi gị mgbe ị na-eme njem, na-enye gị onye ịkọrọ gị na-echeta na, Nke bụ nnukwu akụkụ nke na-eme njem site na Europe.
Mgbe njem site Europe naanị agbalị ịnọ gọọmenti rụrụ.
Gọọmenti rụrụ na-jupụta na mmadụ ndị na-solo njem site Europe, Ya mere nọkọọ izute ya na ndị mmadụ.
Gbalịa ka enyi na enyi na oku dị ka i nwere ike mgbe njem nanị na Ọ bụrụ na ị bụ onye nanị anyị onye, ị ga-mkpa-etinye na extra mbọ na-enyi na enyi na ndị njem ndị ọzọ. Ọ nwere ike na-a ụbọchị ole na ole ka e ji na-ọzọ na-emeghe na enyi na enyi, ma ọ ga-abụ ọnụ ahịa gị oge dị ka ị na-amalite ịzụlite njikọ na ndị njem ibe.
Ọ na-atụ aro na-esi nri na mbikọ, nke ga-enye ohere maka inwe mmekọrịta na ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị na-ọzọ nwere mmasị na nzuko obodo karịa ndị njem ndị ọzọ, mgbe Couchsurfing nwere ike ịbụ a mma nhọrọ maka gị.
Couchsurfing, nke na-agụnye ya meetups na Ogwe na pubs ga-jikọọ gị na obodo omenala na bụkwa a ohere izute expats.
E nwere ụfọdụ ndị European obodo ebe e nwere ndị a otutu pickpockets na ndị ọzọ ụdị omempụ ndị nwere ike na-achọ na- uru ndị njem, Jiri na gị onwe gị nkịtị uche na-agụ njem forums ma ọ bụ ndị ọzọ dị mkpa na ozi na-ahụ na ebe ndị mmadụ iji zere.
Iji chọta ndị kasị mma ahịa na njem site Europe nbanye na anyị website ugbu a. Were 3 nkeji iji wuchaa a ụgbọ okporo ígwè tiketi ntinye akwụkwọ.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/tips-for-traveling-europe-alone-by-train/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / na / fr ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.